Vaovao - Fitiavana fiainana · tia fanatanjahan-tena
Vanim-potoana tsara i aprily, madio ny andro, mafana ny masoandro, madio ny ala efatra, mamelana ny voninkazo serizy, manidina ny sakamalao, voninkazo paiso ny paty, mikiakiaka ireo bibikely sy vorona, miadana ny rivotra. ... tsy ny hatsiaka malefaka amin'ny volana martsa, tsy ny hafanana maina amin'ny Mey, ny zava-drehetra ka mahatonga ny olona hahatsapa ho tony sy faly.
Mba hanatsarana ny fahasalaman'ny mpiasa, hanatsara ny fiainany amin'ny fotoana fialan-tsasatra, hamoahana ny tsindry asa, hanatsara ny fifandraisana ara-pihetseham-po eo amin'ny samy mpiasa, ary hanatsara ny firaisan-kinan'ny mpiasa, ny orinasa dia manoro hevitra fa manomboka amin'ny 23 aprily, hiala amin'ny asa 20 minitra mialoha isaky ny zoma tolakandro ary mandamina ny mpiasa hihazakazaka isan-kerinandro.
Folo kilometatra ny halavirana. Raha mbola tratra ny tanjona, na inona na inona haingana, mihazakazaka, na mandeha haingana; Ny hetsika mihazakazaka isan-kerinandro dia an-tsitrapo indrindra, ary azo atao ny mitondra ny mpianakavy sy ny havany; manomboka amin'ny orinasa, boulevards an'ny vondrom-piarahamonina akaiky, valan-javaboary, sns. Ny sekoly, ny làlambe fanatanjahan-tena, ny farihy ary ny toerana hafa dia mety ho toerana hihazakazahana sy hampihetsiketsika avokoa.
Rehefa avy niasa dia samy nanao akanjo fanatanjahan-tena, kiraro fanatanjahan-tena, famantaranandro ara-panatanjahan-tena ary lambam-pandohalika ny tsirairay. Miakanjo tsara ny fitaovana fanatanjahan-tena rehetra ary vonona handeha izahay.
Ianareo rehetra, nanenjika ahy ianareo ary nahavita ilay hazakazaka lavitra lalana folo kilometatra tamin'ny tontolo mahafinaritra. Ny zaridainam-pokontany, vondrom-piarahamonina, sekoly ary ny làlan'i Huanhu akaiky dia namela ny alokay sy ny dianay. Nentinay izahay, nanatevin-daharana ny ekipa mpihazakazaka isan-kerinandro ihany koa ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana sy ireo mpiara-miasa amin'ny orinasa mpiray finoana.
Mamirapiratra amin'ny vatantsika ny taorinan'ny masoandro milentika, mamindra ny hatsembohantsika isika, miatrika ny masoandro tsy ho ela ary mamihina ny masoandro rehefa mihazakazaka isika.